‘भागवत गीता’ की ‘ए मेरो हजुर ४’ , अनमोल र सुहानाको जोडी कुनमा? – Nepali Entertainment Site
‘भागवत गीता’ की ‘ए मेरो हजुर ४’ , अनमोल र सुहानाको जोडी कुनमा?
झरना थापा लगातार दुई चलचित्र निर्देशनमा व्यापारिक हिसावले अब्बल रहिन्। समीक्षात्मक हिसावले दुवै चलचित्रमा चिप्लिएकी झरना यतिबेला चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ लिएर युरोप उडेकी छिन्। साथमा छिन् उनकी छोरी, सुहाना थापा। सुहाना ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट नेपाली रजतपटमा डेव्यु गरेकी अभिनेत्री हुन्। पहिलो चलचित्रबाट नै राम्रो तारिफ र गतिलो सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीको रुपमा हेरिएकी सुहाना अमेरिकामा अध्यायन गरिरहेकी छिन्। विभिन्न देशमा आफ्नो चलचित्रको टुर सकेपछि उनि अमेरिकामा आफ्नो अध्यायन जारि राख्नेछिन्।
चलचित्रमा अनमोल केसी सुहानाको जोडीको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। दुवैको जोडीलाई दर्शकले राम्रो माया दर्साए। यहि जोडीलाई डोहोर्याउने सोचमा झरना रहेकी छिन्।
उनि दुई चलचित्र निर्माण दोधारमा रहेकी छिन् । यहि दोधारमा उनि ‘ए मेरो हजुर ३’ निर्देशन अगाडी पनि थिइन्। उनले सोचेको प्रोजेक्ट हो, ‘भागवत गीत’। तर वितरक र अन्य नजिकका व्यक्तिको सल्लाहले उनले ‘भागवत गीता’ निर्माण नगरी चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ निर्देशन गरेकी थिइन्। अव उनि ‘भागवत गीता’ निर्माण सोचमा रहेकी छिन। चलचित्रको कथा पनि तयार छ. सुहाना र अनमोलको जोडी झरना दोहोर्याउन चाहान्छिन्। सुहाना पनि चलचित्रको कथालाई लिएर सकारात्मक रहेकी छिन्।
केहि समय अगाडी झरनाले फेसबुकमा अनमोल र सुहानाको तस्वीर शेयर गर्दै मेरो भागवत गीत लेखेकी थिइन्। ‘ए मेरो हजुर ४’ का लागी उनि नयाँ मुहार भित्र्याउन सोचमा छिन्। ‘ए मेरो हजुर २’ बाट सलिनमान बनिया र ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट सुहाना थापालाई चलचित्र नगरीमा भित्र्याएकी छिन्।
अव झरनाले कुन चलचित्र निर्देशन गर्छिन् र अनमोल र सुहानाको जोडी दोहोरिने हो याँ हैन त्यो भने हेर्न बाँकि छ।
युरोपमा बोल्ड सुहाना थापा (फोटोसहित)
पहिलो चलचित्रबाट नै दर्शकको राम्रो साथ पाएकी अभिनेत्री सुहाना थापा...
झरनाको जीवन सुन्दर बनाइदिने सुहानाको मुस्कना (फोटोफिचर)
डेव्यु चलचित्र 'ए मेरो हजुर ३' बाट नै अभिनेत्री सुहाना...
होस् उडाउने गरिमाको बोल्ड तस्विर
अभिनेत्री गरिमा पन्तले नेपाली चलचित्रमा काम गर्दासम्म सोझी नायिकाको उपमा...
‘रातो टिका निधारमा’ सेटमा अंकित र साम्राज्ञी
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बोल्ड र ट्यालेन्टेट अभिनेत्रीको रुपमा रहेकी साम्राज्ञी...
नेपालको पहिलो सहभागिता, ‘कान्स फिल्म फेस्टिबल’ प्रियंका कार्की
अन्तराष्ट्रिय रुपमा सेलिब्रेटिका लागी सर्वाधिक सफल र चासोको रुपमा हेरिएको...
बर्षाले गरिन् मायज व्युटी पार्लर उद्घाटन
चलचित्र प्रमोशनको बेला कलाकारको सक्रियता निकै बेजोडको हुने गर्दछ। रिलिज...
‘प्रेमदिवस’ टिमको सप्राइज नै सप्राइज, आयंकासंग डेट देखि होलिडे ट्रीप
‘मर्दको छोरा’ को खोजिमा केकि
सन्नी लियोनिको नेपाली गीत जेठ २० मा,भाद्र २७ मा चलचित्र
असोजमा निश्चल र स्वस्तिमाको ‘घामट शेरे’
थाइल्याण्डमा आयुष्मानको अंगालोमा शिल्पा (फोटोफिचर)
‘छक्का पन्जा २’लाई दशैँमा सोलो रिलिज, पछी हटे बाघ निर्माता छविराज ओझा
विश्ववजारमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने १० चलचित्र
मदनकृष्णको आत्माकथा ‘महको म’, अनुभव र अनुभितीको संगालो (भिडियो)
अमिताभ र जयाको बलिउड चलचित्र ‘जंजिर’ रिलिजको ४४ बर्ष , यी ९ स्टार छैनन् जीवित
युवा स्टारको प्रेम चर्चा: अनमोल, प्रदिप, पल र आकाश संग जोडिएका यी नाम
पाथिभरा न्युज नेट्वर्क प्रा. लि
केन्द्रिय कार्यालय: नया बानेश्वर, काठमाँडौ । Email :- admin@977mag.com Website :- www.977mag.com
Copyright © 2018 977mag.com | All Rights Reserved.